Diyaarinta iyo qabanqaabinta CT scan ee xuddunta laabta - dhamaan bukaanku u baahan yahay in ay ogaadaan | | LIFE PICKER - 2018
Diyaarinta iyo qabashada CT scan ee saxarada laabta ayaa ah dhammaan bukaanka u baahan inay ogaadaan.
CT ee xuddunta laabta waa hab casri ah oo cilmi baaris caafimaad ah, taas oo suurtogelisa in ay si dhakhso ah oo sax ah u falanqee xaaladda hadda ee xubnaha jirka iyo hesho images 3D. Farsamadu wuxuu ku saleysan yahay xaqiiqda ah in raajada raajada ay saameyn ku yeelanayso cufnaanta kala duwan ee unugyada aadanaha siyaabo kala duwan.
Xubnaha baaray ee xabadka xabadka
Tay tayo sare leh iyo wargelin Tomografi lagu xakameynayo xabadka xabadka kuu ogolaanayaa inaad baaritaanka xubnaha sida:
Aorta, halbowlaha wadnaha iyo sambabaha;
Sababtoo ah aragtida 3D, waxaa suurtagal ah in lagu baaro qaabka walaxda isku-dhafan, si loo ogaado xitaa cilladaha yaryar.
Sidee loogu diyaar garoobaa nidaamka?
Haddii laguu xilsaaro, tusaale ahaan, Baadhitaanka CT-ga ee daloolka caloosha ee Kiev, markaa daraasaddu waxay u baahan doontaa in loo diyaariyo hab gaar ah. Laga soo bilaabo qaabka looxiray ee xabadka, ka dibna ma jiro nidaamyo gaar ah. Waxaad u baahan doontaa inaad ka saarto dhammaan qalabyada iyo birta dahabka ah. Intaas waxaa sii dheer, marka la eego mudada nadiifinta, waa inaad musqusha ka hor tagtaa.
Bukaan-socodka waxaa lagula talinayaa inay xasuusato qodobbada muhiimka ah:
Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso oggolaansho qoraal ah oo aad ku qaadato shaxanka;
Haddii aad xasaasiyad ku leedahay iodine ama badeeco badda, tan waa in horay loo soo sheegaa;
Waxaa haboon in la yimaadaa sahanka dhar dabacsan;
Haddii aad qorsheyneyso inaad isticmaasho wakiil u dhiganta, waa inaad iska joojiso saacadaha 5-6 ka hor dhacdada.
Dhanka kale, aan ka hadalno xayiraadaha: habka loo socodsiin dadka qaba murqaha joogtada ah, miisaan culus, claustrophobic (haddii dhibaatada aan lagu xallin karin ladagaalayaasha) ama miyeloma, ilmaha, iyo sidoo kale haweenka uurka leh. Hooyooyinka kalkaaliya xanuunka, kahor intaan la gaarin CT, waa in ay cadeeyaan caanaha.
Inkastoo xaqiiqda ah in qalabyada iyo qalabka qaaliga ah ee loo isticmaalo in lagu sameeyo shaybaar lagu xareeyo xarumaha caafimaadka, wax dhib ah laguma samayn nidaamka laftiisa. Marxaladaha hirgalintoodu waa sida soo socota:
Waxaad u baahan tahay inaad ka saarto qurxinta oo idil oo waxaad ku seexataa miis gaar ah;
Jidhkaaga ayaa lagu hagaajin doonaa gacan-ka-qabashada cudurrada gaarka ah (tani waa la sameeyaa sababtoo ah kalsoonidii natiijada ka dhalatey shaxanka la xarriiqay waa mid aad lagama maarmaan u ah inuu jirka sii wado) Xitaa haddii aad xoogaa yar ka baxdo gacantaada ama si aan toos ah u dhaqaajin suulashaada, natiijooyinka baaritaanku si aad ah ayuu wax u dhimi karaa;
Guryaha guurguura waxaa laguugu soo kaxeyn doonaa qalab gaar ah, oo leh qalab aad u fiican.
Raadinta raajada X-rayku waxay noqon doontaa meesha kaliya ee la rabo ee xabadka xabadka. Sawir-casri casri ah ayaa natiijooyinka u gudbin doona shaashadda PC-ga.
Haddii wakiil ka duwan kan loo isticmaalo ...
Xaaladaha qaarkood, daraasad ayaa lagu magacaabaa iyada oo aan wax khasaare ah lana sugeynin walxaha ka hortaga caafimaadka. Waxaad u baahan doontaa inaad iska joojiso cuntooyinka ka hor inta aan la samayn nidaamka.
Kala duwanaansho, sida caadiga ah ayaa loo abuuray iyada oo ku saleysan iodine, waxaa lagu duraa xidid. Tixgeli in maaddadu ay sababi karto muuqaalka ku-meel-gaadhka ah ee neefta oo gaabisa, cadaadisku kordhiyo, wuxuu keenaa dhiig culus madaxa, qandho iyo lallabo. Waxaad dareemi kartaa biraha afkaaga. Dhammaan calaamadaha kor ku xusan waxay iska baabi'i doonaan maalinta xigta. Si aad kalyahaaga uga takhalustid iskeelka sida ugu dhakhsaha badan, cab cabitaan cusub oo cusub.
Xinjir taariikhi ah oo lagu xakamaynayo, sida caadiga ah, ayaa loo adeegsadaa natiijada ugu fiican iyo waxtarka leh marka baarista maraakiibta, wadnaha iyo sambabada.
Fikrad khibrad leh ka dib qaabsocodka waxaa la bixiyaa saacadaha soo socda.
Julia wax lagu qoro Nalalka beerta ku haboon
Putin wuxuu sheegay in yaraanshaha shucaaca asalka ah ee ku sugan Sodrodvinsk
"Caadooyinka ugu wanaagsan ee Klitschko": Azarov wuxuu ku jees jeesay 'codkarka' ee Groysman
Minibus waxaa ku dhacay shan baabuur oo kuyaala agagaarka, waxaa jira dhibanayaal
Baradhadu, bur iyo bariis ayaa kor ugu kaca qiimaha Kazakhstan
Baasuukaha reer Russia ayaa qaatay biladii Koobka Aduunka markii ugu horeysay taariikhda
Apple waxay ku bixisaa $ 6 Bilyan oo Soo Saar ah Soosaaraheeda iyo Taxanaheeda
Dayrta ayaa soo dhowaatay: ku dhawaad ​​dhammaan hirarkii madoobaa ee ka soo duulay Moscow
Cunto qafiif ah oo ku taal Ibiza - macaan, tayo sare iyo xirfad leh!
Qashin ururinta gudaha Kiev heer heersare ah